HALA-JAZA ETO AN-DRENIVOHITRA : Zaza miisa efatra no tsy hita tao anatiny herinandro iray
Amin’izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia hita soritra eto an-drenivohitra ny fangalaran-jaza amin’ny endriny maro samihafa. 8 août 2017
Tao anatiny herinandro izao dia zaza efatra no tsy hita ka ny roa vavy tamin’ireo dia monina eny Andoharanofotsy ary ny roa hafa kosa dia tsy hita tamin’iny faritra Analamahitsy iny. Hatreto aloha dia ilay ankizivavy kely iray nipetraka eny Andoharanofotsy no tafaverina teny amin’ny tranon-dray aman-dreniny, ny zoma lasa teo.
Marihina fa tokony ho enina taona eo io zaza io raha ny fanazavana voaray ihany.
Niezaka nampandre ny olon-drehetra ny fianakaviana rehetra tamin’ny tsy fahitana azy, ka ny nahagaga ny iray tanàna indray dia nipoitra moramora indray ilay zaza tamin’io zoma io Rehefa natao ny fanadihadiana azy dia nilaza ny tenany fa “nisy ramatoa iray nisintona azy teo an-tokotany, ny talata lasa teo ka niditra tao anaty fiara avy hatrany izy ireo taorian’izay.
Niezaka nanadihady azy ny fianakaviany taorian’ny nahitana azy io saingy tsy misy fantatr’ilay zaza izay tokony holazainy sy izay rehetra nataony tany amin’ny toerana nitondrana azy. Manahy mafy, araka izany, ny fianakaviany manoloana ny zava-misy satria dia ny zaza iray hafa very tany amin’iny faritra iny dia tsy mbola tafaverina hatramin’izao.
Marihana ihany koa fa ireo very teny Analamahitsy ihany koa dia mbola tsy hita popoka. Mipetraka ny fanontanian’ny mpanara-baovao noho ny firongatry ny hala-jaza satria toa lasa mifanesisesy izany tato ho ato ary tsy fantatra mazava hoe hatao inona tokoa ireo zaza ireo. Hatreto anefa dia mbola tsy fantatra mazava ny tambajotra manao ity hala-jaza ity. Misokatra amin’izao fotoana izao ny fanadihadiana ka andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.